New manifesto tool to compare parties on human rights — လူ့အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီများ၏ ကတိကဝတ်များအပေါ် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသည့် Tool အသစ် – Free Expression Myanmar
Oct 19, 2020 by Coordinator	in News သတင်း
မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ကတိကဝတ်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် Tool အသစ်တစ်ခုကို FEM က စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ဤ tool တွင် အထွေထွေသောလူ့အခွင့်အရေး၊ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်၊ သတင်းအချက်အလက်ရယူဖြန့်ဝေနိုင်ခွင့်၊ အမုန်းစကားနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေး စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီများ၏ ကတိကဝတ်များကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားသည်။
“ကျွန်မတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပေးထားတဲ့ ကတိကဝတ်တွေအကြောင်း ပြည့်စုံတဲ့၊ အချက်အလက်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထားတဲ့၊ ကတိကဝတ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြပေးထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကတိကဝတ်ပြုထားခြင်းမရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ကို မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေထံ ပေးပို့ဖို့ပါပဲ။ ဒါမှ မဲဆန္ဒရှင်တွေက ဒီလိုအရေးကြီးလှတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အချက်အလက်သေချာသိပြီး ပြည့်ပြည့်ဝဝဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်” လို့ FEM ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ယဉ်ရတနာသိန်းက ဆိုပါသည်။
“နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေဟာ ရှင်းလင်းသေချာတဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို ရရှိလိုတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ ဆန္ဒကို မဖြည့်နိုင်ဘဲ၊ ဝေဝေဝါးဝါး အာမခံချက်တွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီးပြီဆိုတော့ အခုတစ်ခေါက်မှာ ကျွန်မတို့ဟာ ပိုပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲအသိပညာနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ သိရှိလာကြပြီ ဖြစ်သလို၊ တောင်းဆိုမှုတွေလည်း ပိုမိုပြုလုပ်လာကြပါပြီ။ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို အာမခံချက်ပေးတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို ကျွန်မတို့လိုချင်ပါတယ်” ဟုလည်း သူက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ဒီ Tool အသစ်က မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ အဓိကကျပြီး လူစိတ်ဝင်စားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ထားတာဖြစ်တယ်၊ ဘယ်ပါတီတွေက လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအခိုင်အမာကတိကဝတ်ပြုထားသလဲ၊ ပြီးတော့ ဘယ်ပါတီတွေကတော့ ဘာကတိမှ ကတိမပေးထားဘူးဆိုတာကို ခွဲခြားဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်” လို့ သူက အဆုံးသတ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကတိကဝတ်များ နှိုင်းယှဉ်သည့် စာမျက်နှာကို ဤလင့်(ခ်)တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၆ လမှစ၍ FEM သည် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် စတင်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး မီဒီယာအခွင့်အရေး၊ သတင်းအချက်အလက်ရယူဖြန့်ဝေခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်၊ မတူကွဲပြားမှုများအပေါ် သည်းခံလက်ခံနိုင်စွမ်း/ အမုန်းစကားနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးများ စသည့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် ပတ်သက်သော ကတိကဝတ်များ အခိုင်အမာပြုရန် တိုက်တွန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကတိကဝတ်များ နှိုင်းယှဉ်သည့် Tool တွင် ခိုင်မာသောသုတေသနနည်းစနစ်အရ ခွဲခြားရွေးထုတ်ထားသော အဓိကပါတီ ၂၁ ပါတီကို ဖော်ပြထားသည်။ FEM သည် ပါတီများ ဤသုတေသနကို နိုင်ငံရေးပါတီများ သိလာစေရန် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် ပါတီတစ်ခုချင်းစီကို ပုံမှန် ထပ်ကာထပ်ကာ ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
ဤ Tool တွင် ကတိကဝတ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အမှတ်ပေးထားခြင်းများ ပါဝင်သည်။ ရမှတ်များသည် ကတိကဝတ်၏ အရည်အသွေးပေါ်မူတည်၍ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အမှတ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ရှင်းလင်းသော ဖြေရှင်းချက်များလည်း ပါဝင်ပေသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ယခင်ကတိကဝတ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပြီးစီးအောင်မြင်ခဲ့ခြင်း ရှိ မရှိကို မဲဆန္ဒရှင်များမှ လက်လှမ်းမီ သိရှိနိုင်ရန် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့သော နိုင်ငံရေးပါတီများ​၏ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ကတိကဝတ်များကိုလည်း Tool တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
FEM launchesanew digital tool enabling voters to compare the manifesto commitments of political parties participating in the 2020 general elections. The tool compares parties’ commitments to general human rights, media freedom, protest, RTI, hate speech, and digital rights.
“Our aim is to give the electorate complete, verified, and comparative information about the political parties’ human rights promises – or lack of promises – so that voters can makeafully informed decision in this vitally important election,” said FEM Director, Yin Yadanar Thein.
“Political parties’ public campaigns are dominated by vague assurances that do not fulfil the electorate’s desire for clear commitments. Myanmar people have leapt forward since 2015 and we are more educated, informed, and demanding. We want real commitments to democratisation and human rights,” she added.
“This new tool compares the manifesto commitments of Myanmar’s major political parties, identifying where the parties make strong commitments to human rights, and also where they make none,” she ended.
The manifesto comparison tool can be found at: https://freeexpressionmyanmar.org/manifestos/
FEM has interacted with political parties for six months, encouraging them to make clear manifesto commitments to freedom of expression, including media freedom, right to information, freedom to protest, tolerance\_hate speech, and digital rights.
The manifesto comparison tool covers Myanmar’s 21 major parties, identified witharigid methodology. FEM repeatedly and regularly contacted each party throughout the pre-election process to ensure that the parties were aware of the project.
The tool also includesascore for each commitment. The scores are generated according to the quality of the commitment. The tool includes clear explanations for each scoring.
FEM has also included the national parties’ 2015 manifesto commitments in the toolx so that voters can assess how the parties have changed and whether they have worked to achieve their previous commitments.
Manifesto comparison tool >>
FEM on elections >>
Tagged with: Elections, NLD, Union Election Commission